IINDIDI ZEEFAUCU ZANGAPHANDLE (IGADI KUNYE NESIKHOKELO SEPATIO) - IZITIYA KUNYE NOKUHLALWA KOMHLABA
Eyona izitiya Kunye Nokuhlalwa Komhlaba Iindidi zeefaucu zangaphandle (iGadi kunye nesikhokelo sePatio)
Iindidi zeefaucu zangaphandle (iGadi kunye nesikhokelo sePatio)
Nazi iindidi zethu zesikhokelo seetampu zangaphandle kubandakanya iimodeli ezaziwa kakhulu kwigadi yakho okanye kwipatiyo. Xa kuziwa ekucwangciseni ikhaya lakho, awufuni ukulibala iinkcukacha ezincinci. Oku kubandakanya ukuqinisekisa ukuba unemibhobho efanelekileyo ngaphakathi nangaphandle kwekhaya lakho.
Ngokuphathelene neepompo zangaphandle, usenokucinga ukuba ungahamba kunye nayo nayiphi na indlela onokuthi unamathele kuyo ngenxa yexabiso okanye ngobuhle. Ngokwenene kukho inani leentlobo ezahlukeneyo zeefompo zangaphandle ezilungiselela iimfuno zabanini bamakhaya abohlukeneyo.
Ukuqinisekisa ukuba unemipu ekhangeleka intle kwaye isebenza ngendlela othanda ukuba yenzeke ngayo, siza kuyaphula yonke into oyifunayo malunga neentlobo ezahlukeneyo zeefompo zangaphandle.
Umbhobho wombhobho webhobho
Frost-Ubungqina Faucet yangaphandle
Yangaphandle Shower Faucet
Yangaphandle Ikhitshi Faucet
Ifompu ye-spigot lukhetho lwesiko onokuthi uve nalo ekubhekiswa kulo njengephampu yokucinezela yevalve. Oku kusebenza kwiimeko ezininzi xa yonke into oyifunayo iyimpompo yangaphandle ethe ngqo.
Ngelishwa, ukuba uhlala kwindawo ebanda kakhulu okanye kwimozulu enobusika obubandayo, unokubona itepiget faucet ihlupheka ngenxa yokunqongophala kwemozulu.
Indlela esebenza ngayo le mibhobho yeepigot ilula nayo. Into ekufuneka uyenzile kukujika isiphatho kwimpompo ngasekhohlo kwaye amanzi avela endlwini yakho aya kugalela ngaphandle kwespout.
Ukujikisa isibambo ngasekunene kuya kumisa ukuhamba xa ukufuna. Ngokubanzi, ukuba nje ungakhumbula i-adage yakudala ye-lefty loosey, tighty tighty, emva koko awuyi kuba nangxaki ekusebenziseni itompu yespigot.
Kumacandelo aqhubela phambili, siza kujonga iindlela ezimbalwa zokuphuculwa kwezi mpompo ngokhuseleko olungcono.
Iimpompo zebhobho ye-hose zihlala zibizwa ngokuba zi-spigot okanye i-sillcock. Ukhetho oluhle oluqhelekileyo lweefomethi zangaphandle ngokunjalo kwaye unokufumana enye ngaphandle kwekhaya lakho ngoku!
Ezi zihlala zisetyenziselwa ukuncamathelisa ithumbu kumthombo wamanzi kwaye zinoyilo olusebenzisekayo. Uninzi lwale mibhobho ye-hib bib ithembele kwivelube yeglobhu ekuncedeni ukulawula ukuhamba kwamanzi kwaye isebenze ngokufanayo kwiipompo zevalvevu zokucinezela. Oku kungatshintsha, nangona kunjalo, ukuba umbhobho we-hose bib wenziwe ukuba ungangqinwa yiqabaka okanye kungenjalo kungene imozulu.
Ngokwenene bubuthathaka bethumbu lephepha le-hose bib kukuba, embindini wabo, abayi kuthintela imozulu kakhulu. Kungenxa yoko le nto uninzi lwabanini bamakhaya abakhetha olu hlobo lwetheyiphu nokuba kungokukrala kwiimpawu ezongezelelekileyo zemozulu okanye bakhethe olu khetho ukuba bahlala kwimozulu engentle.
Kukho konke, nangona kunjalo, ezi ntlobo zeefompo zithembekile kwaye zihlala zixhomekeke ekukhetheni iimfuno zesiseko sangaphandle.
Iimpompo zevalufa zeBhola zithandwa kungekuphela xa kufikwa kwiimpompo zangaphandle kodwa nakwiipompo zangaphakathi. Oku kusebenza ngendlela elula. Kukho ibhola efakwe ngokuqinileyo kwivelufa kunye namanzi agqitha ngqo emngxunyeni webhola. Oku kulawula indlela aphuma ngayo amanzi kumbhobho wakho wangaphandle.
Xa uvula itompu, ibhola iyajika ukuvumela amanzi ukuba agqithe. Nangona kunjalo, kukho icala elingezantsi kule ndlela.
Ngenxa yokuba ibhola ivulelwe ukuba ivuleke okanye ayisiyiyo, akukho zininzi zinokukhethwa xa kufikwa kuxinzelelo okanye ukungafani kokuhamba.
Ngethamsanqa, oku kuyakusebenzela injongo esisiseko yokuba itompu yangaphandle edityaniswe nethumbu, umzekelo, iya kufuna. Eso sesona sizathu siphambili sokuba ungaziva ezi mpompo zangaphandle kubhekiswa kuzo njengezivalo ezivaliweyo ngokunjalo.
Sitshilo ngaphambili ukuba kukho iindlela zokukhetha iqabaka lombhobho weqabaka ukuba umndilili wombhobho womelele awomelelanga kangako. Ezi ntlobo zeepompo zangaphandle, njengegama zibonisa, ziyilelwe ukumelana nemozulu ezibandayo ngokungabi sengozini yesoyikiso njengeqabaka.
Jonga lo mbhobho weqabaka ngaphandle IAmazon. (Qhagamshela ikhonkco)
Olu luhlobo lwe-must-have uhlobo lwompompo ongaphandle onawo ukuba uhlala kwimozulu ebandayo okanye eqhele ukubanda.
Emva kwayo yonke loo nto, ekubeni itepu ihlala ingaphandle, ayinalo olunye ukhuseleko kwizinto ezivela kubushushu. Ngale ndlela, unokunceda itephu yakho yangaphandle ihlale ixesha elide kwimozulu ebandayo.
Inqaku elinye lokwenza ngezi mpompo kukuba kufuneka uqiniseke ukuba ukhupha ithumbu lakho kubo xa lingasetyenziswa. Kungenxa yokuba iipompo zifakwe kwikona esezantsi ukunceda ukukhupha amanzi kuzo, kuthintele ukuba zingabi ngumkhenkce kumbhobho. Umbhobho awuyi kuvumela ukuba uphume ngokupheleleyo xa ugqibile ukuwusebenzisa.
Jonga le faucet yokulwa nesiphon IAmazon.
Olunye ukhuseleko onokuluthatha xa usebenzisa itompu yakho yangaphandle kukuthenga itompu yokulwa nesiphon. Ezi mpompo zivumela amanzi ukuba ahambe ngendlela enye. Oku kuthetha ukuba akukho thuba lokuhamba kwamanzi ngasemva, ukwazisa ukungcola kunikezelo.
Oku kubaluleke kakhulu ukuba uqwalasele ukuba i-faucet yakho yangaphandle ixhunyiwe kumanzi akho okusela. Into yokugqibela ofuna ukuyenza kukuvumela ukungcoliswa kukusetyenziswa kwetephu engaphandle ukuphela ukubuyela ekhaya ukuze kuselwe usapho lwakho okanye ukuhlamba izitya zakho.
Iindaba ezimnandi zezokuba iimpompo ezininzi zangaphandle ziza neli nqaku lifakwe kwangaphambili. Ukuba akunjalo, nangona kunjalo, lulongezo olulula oluya kusindisa inkxalabo enkulu ekuhambeni kwexesha. Into ekufuneka uyenzile kukuthenga ivalve yokulwa nesiphon ehambelana netephu yakho. Emva koko, yisongele ukuphela kwesipout ukuyifaka.
Iidrive hydrants lukhetho olunobhetyebhetye xa kufikwa kwiimpompo zangaphandle. Endaweni yokudibanisa nenkqubo yamanzi ekhayeni lakho, adityaniswa nemibhobho yokuhambisa amanzi phantsi komhlaba. Oku kuza nezibonelelo ezimbalwa ezahlukileyo.
Kunye, le mibhobho iphantsi komhlaba igqume kakhulu kwimozulu ebandayo kunemibhobho esekhaya. Oku kuthetha ukuba nokuba uhlangabezana nobusika obuqatha, awuzukuba naxhala kakhulu malunga nemibhobho yakho ebandayo kwaye ulahlekelwe okwethutyana kukufikelela emanzini.
Olunye uncedo olukhulu lweyard hydrants kukuba akufuneki zibekwe kufutshane nendlu yakho ukuba awufuni ukuba njalo. Emva kwayo yonke loo nto, indlu ayiqulathanga mthombo wabo wamanzi, umhlaba unawo. Ngenxa yoko, ii-hydrants zaseyadini zikunika igumbi elininzi ngakumbi ekuthatheni isigqibo sokubekwa kohlobo lwetampu engaphandle eyadini yakho ukuze ilingane into oyifunayo.
Ziyilwe intuitively nazo. Xa ufuna amanzi, konke okufuneka ukwenze kukutsala isibambo kwaye amanzi aya kubaleka kumbhobho. Umgama ulawula lo msantsa udalekileyo kumbhobho, ke okukhona usiya phezulu, amanzi aphuma ngakumbi. Lilonke, zintle ngokulula kwaye kulula ukuzisebenzisa.
Umbhobho wokuhlambela ongaphandle ungasetwa ngamanzi ashushu okanye abandayo kuxhomekeke ekubeni ufuna ukuba ubandakanyeke kangakanani. Zingaba nkulu ukuba unendawo yokuqubha okanye uhlala kufutshane nolwandle ukuze uqiniseke ukuba iklorin okanye isanti ayilandelelwa ekhayeni.
Yintoni oza kuyenzela umntakwenu ngomyeni wakho ngekrisimesi
Njengeprojekti ye-DIY eqhuba kuphela amanzi abandayo, umbhobho wokuhlambela ngaphandle kunokuba lula njengokuqhuba umbhobho wegadi ukusuka kumbhobho ongaphandle ukuya kwintloko yeshawari enqunyanyiswe kubude obufanelekileyo bokuhlamba.
Kwabo banqwenela amanzi ashushu umtywini unakho ukungena kwisivumelwano sokufaka i-Y efanelekileyo ezisa amanzi ashushu nabandayo kunye kwintloko yombhobho wokuhlamba ongaphandle.
Okokugqibela, kukho ukhetho lwe ikhitshi elingaphandle itepu. Njengokuba igama lepomferensi yasekhitshini lisenokucebisa, le yipompo yangaphandle enxibe ukujonga njengaleyo unayo ekhitshini lakho. Ewe kunjalo, oku kuza nesiporho sokuqala kunye nesiphatho esingafunekiyo okanye esahlulwe ecaleni.
Ezi mpompo ayizizo izinto ozifunayo ukuba ufuna ihipping. Endaweni yokuba ezi zilungele amakhitshi angaphandle aneesinki. Cinga ngento oyisebenzisela umpompo wakho wasekhitshini wangaphakathi kwaye uyazi ukuba zeziphi ezi mpompo zihlala zisetyenziselwa indawo eyahlukileyo.
Kukho iindlela ezahlukeneyo onokukhetha kuzo xa ufuna ukongeza itephu yangaphandle ekhayeni lakho. Kuxhomekeke kwimozulu ohlala kuyo kwaye ufuna ukusebenzisa itepu yakho, uqinisekile ukufumana into ehambelana ngokugqibeleleyo neemfuno zakho kunye neemfuno zakho.
Ngolunye ulwazi olunxulumene noko jonga iphepha lethu kwi iintlobo zeefompo zasekhitshini .
Iindleko eziphakathi kwabafoti bomtshato
ngubani owenza aaron rodgers umhla
Ikhitshi lesidlo sakusasa ekhitshini
iincwadi zomcwangcisi womtshato zabatshakazi
blake umlinganiso wokuzibandakanya kwendandatho enomdla
iiseti zangaphantsi ezifanayo
iimvakalelo zothando kuye